Dawladda Kenya oo Dhaqaalle Xooggan ku bixineysa Muranka Badda Soomaaliya – XOGMAAL.COM
Dawladda Kenya oo Dhaqaalle Xooggan ku bixineysa Muranka Badda Soomaaliya
By Soomaaliya	 Last updated May 15, 2019
Dawladda Kenya ayaaa dhaqaalle xogan ku bixineysa Kiiska Muranka Badda ee kala dhexeeya Dawladda Soomaaliya, iyadoo Qareennada u doodaya labada dhinac ay helayaan faa’idada ugu badan ee dhaqaale, Xilli kiiska murankani uu marayo meel xasaasi ah.
Wargayska Business Daily ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Qoray in wasaaradda maaliyadda ee dalka Kenya ay ku bixisay lacag dhan Ksh300 oo milyan oo shilinka Kenya ah taasi oo u dhiganta 3 milyan oo doolar.
Sida ku cad qiyaasta miisaaniyadda sanadkan dowladda Kenya ayaa kordhinaysa lacagaha dhanka sharciga oo iminka ah 1.7 bilyan oo shilinka Kenya ah, waxaana sanadkan la gaarsiinayaa 2 bilyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 20 milyan oo doolar.
Maxkamadda caalamiga ah ee (ICJ) ee fadhigeedu yahay Hague ayaa qaadaysa dacwad dhanka badda ah oo ay dowladda Soomaaliya u gudbisay 2014, ka dib markii ay ku guldareysteen wadaxaajood labada dhinac u dhaxeeyay.
Kiisaska muranada ee la geeyo maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go’aan ka gaaristooda waxay qaadataa muddo sannado ah.
DAAWO: Wiil Hargeisa lagu xiray ka dib markii uu xirtay Maryo ka samaysan Calanka Soomaaliya